अनुपम भट्टराई	|| 30 June, 2021
यतिबेला विश्व कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ । पहिलो विश्वका उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरुलाई समेत नियन्त्रणमा गर्न मुस्किल परिरहेको यो महामारी विरुद्धको लडाइँलाई ‘जैविक युद्ध’ को संज्ञा दिन थालिएको छ । यो जैविक युद्धमा फ्रन्टलाइनका सिपाही चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । तर, महामारीमा यी सिपाहीहरु पटक–पटक आक्रमणको निशाना बनिरहेका छन् ।
घटना असार १२ गते राती १२ बजेको हो । दोलखास्थित तामाकोशी गाउँपालिकाको मालुमा सञ्चालित अस्थायी कोभिड–१९ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. रोबिश कार्की र कर्मचारी टोपबहादुर मिजारलाई स्थानीय यूवाहरुले कुटपिट गरे ।
मदिरा सेवन गरी आएका ४ जना युवाहरुको समूहले कार्यालय सहयोगीको घाँटी न्याकेको र आफूमाथि हातपात गरेको डा. कार्कीले बताए । बाहिरै झगडा गरेर आएका उनीहरु मध्ये एकजनाको गोडामा चोट लागेपछि उपचार गर्न भन्दै अस्पतालमा आएका थिए । कोरोना अस्पताल भएकाले आफूले बाहिरै आएर उपचार गरिदिन्छु भन्दा हामीले बनाएको अस्पताल भित्र छिर्न नपाइने भन्दै उनीहरु हातपातमा उत्रिएको डा. कार्की बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन हातपात गर्दै जागिरबाट निकाल्छु, मार्छु समेत भन्न थालेपछि गेट बन्द गरेर छतमा लुकेर ज्यान बचाएको उनी सुनाउँछन् । ‘आफ्नै गाउँमा त हामी सुरक्षित छैनौँ भने अन्त झन् के होला,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘यसले आत्मबल घटाएको छ, उनीहरुविरुद्ध जाहेरी दिएका छौँ ।’
जारी अध्यादेशमा ‘क’ र ‘ख’मा अस्पतालको भौतिक संरचनामा क्षती र तोडफोड गर्नेलाई जिल्ला अदालतमा सिधै लैजाने तर ग र घमा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको अध्यादेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या सुल्झाउने गरी आएकोले पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएको गुनासो छ ।
स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत जेठ १४ गते कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा मृतकका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गरे । जेठ ४ गतेदेखि उपचाररत दाङका ५३ वर्षीय डिल्ली बहादुर रावतको उपचारका क्रममा जेठ १४ गते राति ८ बजेतिर निधन भयो । निधनपछि आक्रोशित बनेका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्नुका साथै आईसीयू कक्षमा तोडफोड गरेका थिए । घटनामा तीन स्टाफ नर्स र एक चिकित्सक गरी चार जना माथि आक्रमण भएको थियो । यो भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएको तेश्रो पटक हो । यसअघि पनि दुई पटक यस्तै प्रकृतिका घटना भएको बताउँछन् भेरि अस्पतालका प्रवक्ता डा.संकेत कुमार रिजाल ।
‘ड्यूटिमा रहेका बेला आपत्कालीन आईसीयू कक्षमा अचानक आक्रमण हुँदा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको ज्यान बचोस् भनेरै उपचार गर्छन्, तर गम्भीर बिरामीलाई बचाउने प्रयास गर्दा मृत्यु भएपछि आफ्नै ज्यान जोगाउनै गाह्रो भएकोले त्रास पैदा भएको छ ।’ भेरी घटनामा आक्रमणकारीबाट बच्न स्वास्थ्यकर्मीहरुल छतबाट हामफाली भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएका यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । तर कतिपय घटनाहरु स्थानीय निकायमै मिलेमतोमा सल्टिने गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् । ‘घटनाका दोषीले कानूनी कारवाही नै पाउँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय तहमै मिल्ने हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु निशाना बनिरहेका छन् ।’
किन हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार आक्रमण ?
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुनु अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था पनि एउटा कारक रहेको मनोचिकित्सकहरु बताउँछन । कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरु अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । अक्सिजनको कमी, कतै बेडको अभाव, जसको परिपूर्ति गर्न नसकेको सरकार र बेडको अभावका कारण उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका संक्रमित । जसको तनाव व्यहोरिरहेका बिरामी कुरुवाहरु बिरामीको मृत्यु भएपछि झनै आक्रोशित बन्दा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्न पुग्ने मनोविद् गोपाल ढकाल बताउँछन् । ‘बिरामीका आफन्तहरु आक्रोसित भइरहेका हुन्छन्, के ठिक र के बेठीक त्यसको निर्णय लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भावनात्मक रुपमा उथलपुथल बनेको हुन्छ, जसकारण यस्ता घटना हुने गर्छन् ।’
अर्को कुरा चिकित्सकले जस्तो पनि रोग निको पार्छ र बिरामीलाई बचाउन सक्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा र भरोसा आममानिसको रहेको हुन्छ । तर भनेजस्तो भइदिँदैन । समयले अर्को मोड लिन्छ, जसकारण मानिस हातपात र हिंसाको बाटोमा लाग्ने गरेको ढकाल बताउँछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि कसैले आक्रमण गरे २ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ । कसैले कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा आक्रमण गरेमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुनेछ ।
नयाँ अध्यादेशले थपिएको आत्मबल
नयाँ अध्यादेशले सबै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्ने विश्वास लिएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बताउँछिन् । ‘नियम कानून बनाएर मात्र पुग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै भेरि अस्पतालका डाक्टर राजन पाण्डेको मत पनि राईको भन्दा फरक छैन । उनी भन्छन्, ‘यो सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वागतयोग्य छ, तर यसको कार्यान्वयन भएपछि मात्रै राम्रो नराम्रो भन्न सकिन्छ ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की भनेँ अध्यादेशबाट पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैनन् । अध्यादेशको क र ख मा हामीले चाहेको अध्यादेश आएपनि स्वास्थ्यकर्मीको हकमा भने ग र घबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । जारी अध्यादेशमा क र खमा अस्पतालको भौतिक संरचनामा क्षती र तोडफोड गर्नेलाई जिल्ला अदालतमा सिधै लैजाने तर ग र घमा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको अध्यादेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या सुल्झाउने गरी आएकोले पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएको उनको गुनासो छ ।
कोरोना अस्पताल भएकाले आफूले बाहिरै आएर उपचार गरिदिन्छु भन्दा हामीले बनाएको अस्पताल भित्र छिर्न नपाइने भन्दै उनीहरु हातपातमा उत्रिएको डा. कार्की बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन हातपात गर्दै जागिरबाट निकाल्छु, मार्छु समेत भन्न थालेपछि गेट बन्द गरेर छतमा लुकेर ज्यान बचाएको उनी सुनाउँछन् ।
अहिलेसम्म कति स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भयो ?
स्वास्थ्यकर्मीमाथि धेरैपटक दुव्र्यवहार भएको नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राई बताउँछिन् । तर, पछिल्लो समय हातपातकै श्रृङ्खला देखिरहेका छन् जुन पहिला थिएन । तर, यसका यति नै घटना छन् भनेर डाटा नरहेको राईले बताइन् । त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघमा पनि यसको कुनै डाटा छैन । संघका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएका धेरै घटना भएपनि केही घटना स्थानीय निकायमै मिलाइएकोले यति नै भनेर यकिन नभएको बताउँछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरे के हुन्छ ?